AC Milan & Adidas oo kala tegaya xagaaga soo aaddan (Shirkadehee bedeli kara?) – Gool FM
AC Milan & Adidas oo kala tegaya xagaaga soo aaddan (Shirkadehee bedeli kara?)
Raage October 10, 2017
(Milano) 10 Okt 2017 – Waxaa lasoo werinayaa in ay kala tegayaan AC Milan iyo sharikadda ka taageerta dhanka agabka ay ku ciyaarto ee Adidas marka xagaaga la gaaro, kaddib 20 sano oo ay jaal ahaayeen.
Sharikadda reer German ayaa samaynaysay funaanadda Rossoneri tan iyo 1998-kii, iyadoo horayna usoo martay min 1978 ilaa 1980, iyo min 1990 ilaa 1993-kii.
Heshiiska haatan oo ay sanadkii ku qaadato €19.7m oo euro fasalkii ayaa dhici lahaa 2023, balse sida uu qorayo Gazzetta dello Sport waxaa ay Adidas go’aansatey inay heshiiska soo afjarto bisha Juun ee xagaaga soo aaddan.
Milan iyo Adidas ayaa 2013 kala saxiixday heshiis 10 sanadood ah, balse waxaa heshiiska ku jirtey shuruud Adidas u ogolaanaysa inay markii ay doonto heshiiska baabi’in karto.
Adidas ayaa xaqaas ay leedahay ku dhaqaaqi rabtey markii Milan laga iibiyay Chinese-ka. balse waxaa lagu heshiiyay in la gaarsiiyo ilaa iyo xagaaga 2018, iyadoo la filayo inay sharikaddu xitaa heshiiska baabi’iso Diseembar ama Jannaayo.
AC Milan ayaa durba wada xaajood la bilowday sharikaad cusub oo ay ugu horreeyaan New Balance iyo Under Armour, yeelkeede, ma cadda waxa uu qiimuhu noqon doono, ama inay gaari karaan qiimihii €19.7m ee ay bixinaysay Adidas.
GOOGOOSKA: Portugal vs Switzerland 2-0 (Portugal oo 1-aad xiratey)
''Inter Milan waa sida naag qurxoon oo yara doqon ah” - Marco Fassone